‘सेक्स पावर’ बढाउन के गर्ने ?
ramkrishna June 12, 2020	‘सेक्स पावर’ बढाउन के गर्ने ?
मानिसलाई प्रिय लाग्ने गर्छ सेक्स । यसका लागि मानिसले खानपानदेखि लिएर बानी व्यहोरा एवम् आहारविहार सबै परिवर्तन गर्न मन्जुर रहन्छन् । किनभने उसका लागि सेक्स भनेको एक प्राकृतिक आवश्यकता हो, नभई नहुने वस्तु हो ।
सेक्सको चाहना प्रायः सबैलाई हुन्छ । तर, केही मानिसहरुले भने सदैव यस्तो प्रिय यौनकर्मबाट बन्चित भएकोमा बडो चिन्तित हुने गर्दछन् । कतिपयले त बढीभन्दा बढी सेक्स गर्न चाहेर पनि नसकेर दुःखी भएका हुन्छन् । यसका कारण उनीहरु डिप्रेसनको सिकार भएका पनि हुन्छन् । यसको मतलब हो उनीहरु यसको मजाबाट टाढा हुन्छन् ।
यौन क्षमता बढाउन कतिपय मानिसहरुले यो वा त्यो नामका औषधि, खाद्य या अखाद्य पदार्थहरुसमेत खाने गरेको पाइन्छ । कतिपयले बढी पैसा तिरेर भियाग्रासमेत प्रयोग गर्ने गर्छन् । तर पनि एक अनुसन्धानबाट हेर्दा भियाग्रा सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
त्यसो भए कसरी बढाउने त सेक्स पावर ?
१. सेक्सका लागि एक भरपर्दो उपाय भएको व्यवहार हो । मानिसले आपसमा आफ्ना सेक्स पार्टनरसँग केही समय गफिनु पर्छ । यस्तो गफगाफले मानिसमा विस्तारै यस्तो शक्ति पैदा हुने गर्दछ र सेक्सको चाहना बढ्दै जान्छ । जसले वातावरणलाई केही सहज बनाउँछ । यौन सम्पर्क राख्नका लागि कुनै पनि हतार नगर्नुस् । हतारले गरेको काम सफल हुन्न भनेजस्तै यो सुत्र यौन सम्पर्कको कार्यमा पनि लागू हुन्छ । सेक्सका लागि तपाई खुल्नुपर्छ । हिच्किचाउनु हुन्न । जति धेरै खुल्न सक्यो त्यति नै यसले पनि सेक्स पावर बढाउन मद्दत गर्छ ।
२. खानामा ध्यान दिनुपर्छ । यौन शक्ति बढाउने खानामा काजु किसमिसलाई बढी मात्रामा स्वीकार गरिन्छ । त्यसैगरी नियमित रुपमा ओखर सेवन गरेमा पनि सेक्स पावर बढ्छ । यी खाद्यान्नहरु प्रमाणित नै भएका वस्तुहरु हुन् । त्यस्तै गाँजरमा भिटामिन ‘ए’को मात्रा अत्याधिक हुने भएकाले यसको सेवनले पनि सेक्स पावरलाई वृद्धि गराउँछ । भिटामिनले पुरुषमा यौन शक्ति बढाउन भूमिका खेल्छ । तरकारीमा हेर्दा सबैभन्दा बढी यौन शक्ति बढाउनेमा भिन्डी र क्याप्सिकमलाई लिइन्छ । यी खानामा भिटामिन ‘सी’को मात्रा बढी हुन्छ । जसले तपाईको सेक्स पावर वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ ।
३. बेलुकामा यौन सम्पर्क गर्न चाहनेहरुले बेलुकाको खाना हल्का खानुपर्छ । हल्का खानाले दुवै सेक्स पार्टनरलाई सजिलो हुन्छ । अन्यथा हेभी खानाले गर्दा दुवै सेक्स पार्टनर सेक्सका लागि तयार नहुन पनि सक्छन् । यसले अप्ठेरो अवस्था आउन सक्छ ।
४. व्यायामलाई पनि सेक्स पावर बढाउने एक साधनका रुपमा लिन सकिन्छ । यससम्बन्धी केही विशेष व्यायामहरु हुन्छन् तिनीहरुको खोजीगरी हरेक बिहान गर्नुपर्छ ।
Previous Previous post: यस्तो कुखुरा जुन घाँटी काटेपछि पनि डेढ वर्ष बाँच्यो
Next Next post: ईण्डस्ट्रीमा जम्न नसकेकी अदाको हट अवतार (फोटो फिचर)